Burburka diyaaradii siday 91 ruux ee laga lahaa Ruushka oo laga helay Magaalada Sochi – STAR FM SOMALIA
Diyaaraddii militari ee laga lahaa dalka Ruushka, ayaa la sheegay in ay ku burburtay meel ku dhaw Badda Madow, sida ay sheegtay Wasaaradda Difaaca uushka.
Diyaaradda, ayaa qadkeeda la waayay 20-daqiiqo, ka dib markii ay ka duushay Garoonka Diyaaradaha Magaalada Sochi.
Wasaaradda Difaaca Ruushka, ayaa shaacisay Diyaarada inay ku sii jeeday Gobolka Latakia ee dalka Syria, waxaana saarnaa Ciidan iyo Fanaaniin iyo Wariyeyaal.
Wasaaradda Difaaca war kooban oo ka soo baxay, ayaa lagu sheegay “Jajabka diyaaradda Tu-154 ayaa laga helay meel 1.5 Km ama hal mile u jirta xeebta Badda Madow ee Magaalada Sochi.”
Ciidanka iyo dadkii kale ee la socday, ayaa ujeedkooda wuxuu ahaa inay xafladda sanadka cusub ku dhigtaan Gobolka Latakia, oo ciidan Ruushka ka tirsan ay ku sugan yihiin.
Wasaaradda Difaaca Ruushka ma aysan shaacin in dhamaan dadkii saarnaa diyaaradda ay wada geeriyoodeen iyo in la soo badbaadiyay intaba.